Inoshandiswa muatomiki indasitiri yesimba uye indasitiri yemuchadenga. Inoshandiswa senge yekudzora tsvimbo zvinhu zve nyukireya reactors, inogona kushandiswa sediki uye ine simba roketi inosimudzira
Yakanaka makemikari kugadzikana, isingasviki mune acids Yakasimba antioxidant chinzvimbo. TaC inowanzogadzirwa kubva kune tantalum pentoxide uye kabhoni nhema mune inert kana kudzikisira mhepo kuburitsa hupfu hwemhangura.
kukwirira kwenzvimbo, kupisa kwekudziya kwakanyanya, yakasimba oxidation, simba rakakwirira, kuomarara, kwakanaka kwekushisa, kusimba kwakanaka, yakakosha nzvimbo inonyunguduka, yakasimba simba uye ngura kuramba kweakanyanya tembiricha yezvivakwa, uye ine kunyatsoshanda kunyatso mwenje unooneka, Reflective infrared uye simba rekuchengetedza uye mamwe maitiro ekupisa kupisa. Inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi, kupfeka, kupuruzira carbide, aerospace, simba reatomiki, yakaoma firimu uye metallurgia kushandisa uye dzimwe nzvimbo dzehunyanzvi dzeakakosha zvinhu. Kunyanya kune macombo eroketi, anogona kushandiswa kudzoka kumhepo yepasi rose roketi mhino koni nzvimbo
Molybdenum disilicide (Molybdenumdisilicide, MoSi2) imhando yesilicon molybdenum makomputa, nekuti iwo maviri maatomu radius aive akafanana, electronegativity padhuze, saka yakafanana nehunhu hwesimbi uye zvedongo.
Titanium carbide poda inoshandiswa mune yakakwira tembiricha yekupisa yekumwaya zvinhu, zvinhu zvekusimbisa, zvakaoma zvemufirimu zvinhu, zvemauto avhiyesheni matenals carbide uye cermet. Sekuwedzera kwekugadzirwa kwe thermistors, simudzira kupfeka kuramba
ma-multi-phase ceramics ndeimwe yezvigadzirwa zveyakawanda-chikamu ceramic zvinhu. Iyo yakawanda-chikamu zvedongo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinowanzo kuve zvakakura mukuomarara, yakakwira yekunyungudusa poindi, yakanakisa makemikari kugadzikana uye kuitisa musoro Iyo inoshandiswa mune yekupfeka-isingagadzirike zvikamu, yekucheka maturusi uye maelektrode.
Chigadzirwa chacho sirivheri-pfumbu isina kujairika hupfu ine hukuru hwekukweva simba uye inogona kupisa pasi pekupisa kwakanyanya kana mamiriro emagetsi emagetsi.
Kushanda: Titanium upfu mhando yesimbi hupfu ine yakafara application.
Cupric silicide (cu5si), inozivikanwawo sekuti cupric silicide, iri bhinari yesilicon komputa yemhangura, inova simbi inopindirana yesimbi, zvinoreva kuti zvivakwa zvacho zviri pakati pemakomponi eioniki nemaarloys. Iyo ine yakanakisa kuitisa, kupisa kwekushisa, ductility, ngura kuramba uye kupfeka kuramba. Copper silicide mafirimu anogona kushandiswa kupfuudza mhangura yakavakirwa machipisi, inhibit maficha avo uye elektroni kutama, uye kuita sekupararira kwezvipingamupinyi.